Ukukhula komthengi kuyaqhubeka kuhlelo lwe-10 lwe-IMEX America
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iintlanganiso » Ukukhula komthengi kuyaqhubeka kuhlelo lwe-10 lwe-IMEX America
Usihlalo we-IMEX uRay Bloom kunye ne-CEO ye-IMEX uCarina Bauer.
Ngaphezulu kwe-3,000 yabathengi ukuza kuthi ga ngoku babhalisile ukuya kwi-IMEX America kuyo yonke indawo ekucwangciswa kuyo-iarhente yemisitho, imibutho, abacwangcisi benkampani, kunye nabazimeleyo-bonke benamashishini okubeka kunye nabaninzi kwinqanaba eliphezulu (elichazwe njengenqanaba le-C, abalawuli, abanini / amaqabane).
Ikhaya elitsha, intliziyo efanayo enikwe ishishini
Umboniso umalunga nokuqhagamshela abathengi kunye nemiboniso yokubeka ishishini.
Umsitho udlala indima ebalulekileyo ekuvuseleleni ishishini ixesha elide, ukubonelela ngethuba elifanelekileyo lokulinganisa ukuzithemba kumzi mveliso kunye nethemba lokukhula kwexesha lokwenyani ngelixa udibana noogxa kunye namaqabane.
Umboniso wenzeka eMandalay Bay, ngo-Novemba 9 ukuya ku-11 eLas Vegas kwaye wandulelwa nguMvulo ngoMvulo, onikwe amandla yi-MPI, nge-8 kaNovemba.
Iiarhente ngoku zenza i-47% yetotali, abathengi benkampani abangama-22% ngelixa abathengi bemibutho benza i-9% kwaye abathengi abazimeleyo be-18% (abanye - 4%).
"Kwintliziyo yayo, umboniso umalunga nokudibanisa abathengi kunye nababonisi ukuze babeke amashishini - esi sisiseko sayo yonke into esiyenzayo. Kuluvuyo kuthi ukubona loo mfuno kuluntu lomnyhadala weshishini ukuphinda uqokelele kwi-IMEX America kule-Novemba. Kwabaninzi kolu shishino, umboniso ucwangciselwe ukudlala indima ebalulekileyo ekuvuseleleni ishishini ixesha elide, ukubonelela ngethuba elifanelekileyo lokulinganisa ukuzithemba kumzi mveliso kunye nethemba lokukhula kwexesha lokwenyani ngelixa udibana noogxa kunye namaqabane abangakhange babubone ubuso ubuso phantse kwiminyaka emibini. ” UCarina Bauer, CEO we Iqela le-IMEX, ixoxa ngobhaliso lokuqhuba ngokukhawuleza komboniso owenzeka eMandalay Bay, ngoNovemba 9-11 eLas Vegas kwaye yandulelwa nguMvulo ngoMvulo, ixhaswe yi-MPI, nge-8 kaNovemba.
Intlanganiso kunye nabaqeqeshi beminyhadala bayamenywa ukuba bajoyine into ebizwayo njengesiqhelo somzi mveliso wabo wokubuyela ekhaya bhalisa simahla, njengesiqhelo. Ababekho kwindibano banokulindela 'amava akhuselekileyo kodwa angenazintsholongwane' abonisa amava enzelwe ukuhlangabezana neemfuno zangoku zeshishini. Iya kubenza babeke kwaye bacwangcise ishishini elizayo ngelixa bengena kwinkqubo yemfundo ebanzi esekwe kwimikhondo emitsha kunye nezithethi eziqonda imiceli mngeni yeli shishini kunye namandla anokubakho ukuya ku-2022.
Ecaleni kwabathengi, uluhlu lwamazwe aphesheya kwezemiboniso luthembisa ngeveki evekini kwaye lihamba kuwo onke amacandelo omzi mveliso. Oku kubandakanya iindawo ekuya kuzo iAustralia, iSingapore, iDubai, i-Itali, iCanada, iBoston, iAtlanta, iArgentina, iHawaii, iPanama kunye nePuerto Rico kunye namaqela eehotele amaxesha amane, iWyndham Hotel Group, iMandarin Oriental Hotel Group kunye ne-Associated Luxury Hotels International.
UCarina uqhuba athi: “Amaqabane ethu adlale indima ebalulekileyo ekusincedeni ukuba senze umboniso ophilayo obonisa imeko yoshishino olukhoyo kwaye kujoliswe kuyo kwiimfuno zoluntu. Sisebenza ngokusondeleyo nendawo yethu entsha-iMandalay Bay- kunye nesixeko esisingatha- i-LVCVA-ukuqinisekisa ukuba i-IMEX America iyahlangabezana nemigangatho ephezulu yezempilo, intuthuzelo kunye nokhuseleko. Umnqophiso wethu kukwenza umboniso oxhaswa ngamanyathelo okhuseleko akhuselekileyo ngelixa sihambisa umdlalo we-IMEX wokuzonwabisa, umphefumlo kunye nentliziyo esiyaziyo ukuba uluntu lwethu lukulangazelela ngoku.
Ukujonga phambili kuhlelo lwe-10 lwe-IMEX America, uCarina kunye noSihlalo we-IMEX uRay Bloom baxoxa ngemfuno yentengiso yokuthengisa, inqanaba lomboniso kunye nenqanaba lomthengi, utshintsho kumava omboniso nangaphezulu - bukela "Incoko noCarina" yamva nje. Apha.
IMEX America yenzeka nge-9 ukuya kwi-11 kweyeNkanga eMandalay Bay eLas Vegas nge-Smart ngoMvulo, exhaswa yi-MPI, ngo-Novemba 8. Ukubhalisa-mahala-cofa indawo Apha.